Long-term intake of Junk Food - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Long-term intake of Junk Food
အသင့်စားအစာတွေ အရမ်းစားရင် ဘာတွေ ဖြစ်နိုင်သလဲ?
အသင့်စား အစားအစာ အမျိုးအစားပေါ်လိုက်ပြီး ဒါလေးတွေ ဖြစ်တတ်လို့ သတိထားကြရအောင်လား!
၁။ အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်း
အသင့်သောက် အအေးတွေနဲ့ ခေါက်ဆွဲခြောက်တွေဟာ ကစီဓာတ်များစွာ သိပ်သည်းပါဝင်နေပြီး အမျှင်ဓာတ်မပါသလောက်ရှိတဲ့အတွက် ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ပမာဏ ကမောက်ကမဖြစ်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန် မြင့်တက်ခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
၂။ နှလုံးနဲ့ သွေးလှည့်စနစ်
အာလူးကြော်၊ ပီဇာ၊ ဟန်ဘာဂါ၊ ခရက်ကာ၊ ကွတ်ကီး စတဲ့ ဂျုံပမာဏများစွာပါဝင်တဲ့ ဆီကြော်မုန့်တွေမှာ အသွင်ပြောင်းအဆီတွေ များစွာပါဝင်နေပါတယ်။ အသွင်ပြောင်းအဆီတွေကို စားတာ များလာတာနဲ့အမျှ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ နှလုံးအဆီဖုံးခြင်း၊ သွေးကြောကျဉ်းသောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော နောက်ဆက်တွဲရောဂါများ၊ ကိုလက်စရော တက်ခြင်း၊ သွေးတိုးရောဂါတို့နဲ့ ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။
၃။ ဆား များသောအခါ…
ဆားများများပါမှ အရသာရှိတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆားများများ စားတဲ့အခါ သွေးတွင်း ဆိုဒီယမ်ပမာဏ များလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသင့်စား အစားအစာ စားတာများလာရင် လူက ဖောသွပ်သွပ် ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သွေးတိုးရောဂါ ရနိုင်တယ်။
ဆားစားရင် ရေငတ်တယ်လို့ လူတိုင်း ထင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆိုဒီယမ်ပမာဏများလာရင် ရေတင်ဆာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗိုက်ပါ ဆာလာတာပါ။ ဒီတော့ ဆာလိုက်၊ စားလိုက်နဲ့ အဝလွန်လာနိုင်ပါတယ်။ အသင့်စားအစားအစာ တစ်ပွဲထဲမှာ တစ်နေ့စားသင့်တဲ့ ဆားပမာဏရဲ့ ထက်ဝက်လောက် ပါနေတာမို့ ခေါင်းကိုက်တာတွေ၊ ခြေထောက်ယောင်တာတွေပါ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အသင့်စား အစားအစာတွေ စားများလို့ အဝလွန်လာတာနဲ့ အမောမခံနိုင်တော့ပါဘူး။ အဝလွန်ခြင်းဟာ အဆုတ်နဲ့ နှလုံးကို ဒဏ်ပိစေပါတယ်။ အချိန်တွေ ကြာလာတာနဲ့အမျှ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား လုပ်တာနဲ့ မောပြီး လှုပ်ရှားရင်ဖောက်တဲ့ ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါတွေ၊ အိပ်လိုက်တာနဲ့ အသက်ရှူကြပ်တာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အသင့်စား အစားအစာကို အမြဲ စွဲမစားသင့်ပါကြောင်း…